hombodo yekapu moto unopisa mutsara wemashini, moto unopisa mutsindo wechiputi, bhot cap kapinini ye-HCmachine-Gofair Chinese China Manufacturer Supplier Factory
Shona language hombodo yekapu moto unopisa mutsara wemashini, moto unopisa mutsindo wechiputi, bhot cap kapinini ye
Kushandisa: Bhuku rekuvhara mabhodhoro rinopisa rinokonzerwa nemafuta ekugadzirisa zvipfeko zvinowanikwa pazvikamu zvese uye zvisingabvumirwi mabhodhoro emabhodhoro. Inopindira kune rumwe rutivi rwehombodo.
1: Nhamba yose inodya Mvura: 2.2KW;
2. Kutsika kwechando kupisa Range: 20-300 ° C;
3. Kunyaradza mweya kushushikana: 0.6MPA;
4. Michina Diameter: DIA: 15-34MM L: 25-60MM
5. Mazuva ekutambisa Kurumidza: 4200pcs / hr
6. Kunze kwedenga: 210 * 140 * 230CM
7. Nhamba yakakwana: 800KG